News - Bamawl
HR System အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
HR system သုံးဖို့ စဥ်းစားနေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကော၊ HR နယ်ပယ်ထဲ၀င်မယ့် လူငယ်တွေအတွက်ရော HR System သုံးတော့မယ်ဆို ဘာတွေသိထားသင့်လဲ၊ System တစ်ခုပြောင်းသုံးဖို့အတွက် security မြင့်တဲ့ System ဘယ်လိုရွေးချယ်သင့်လဲ စတဲ့ HR System နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အမေးအ‌ဖြေတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (1) Ques: HR ...
Work From Home ကာလနဲ့“နေရာမရွေးတဲ့ BAMAWL HR Software လေး”
Work From Home လုပ်ရတာမလွယ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ COVID-19 ဆိုတဲ့ရောဂါဆိုးကြီးကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့မှာ အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့ ပုံစံတွေက ပြောင်းသွားရတာလူတိုင်းအသိပါပဲ။ ကူးစက်မြန်ရောဂါဖြစ်တာကြောင့် လူတွေဟာ နီးနီးကပ်ကပ် အတူတကွအလုပ်ကြဖို့ဆိုတာ ...
Personal Income Tax အပြောင်းအလဲနဲ့ ခေါင်းအေးစေမယ့် BAMAWL HR Software
အပြောင်းအလဲကိုလူတွေမကြိုက်ကြပါဘူး။ VUCA ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အမေရိကန်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ အီရတ်နဲ့ အာဖရိကန်နစ္စတန် မှာ ဖြစ်ပျက် နေခဲ့တဲ့ အလွန်အစွန်းရောက်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ဖေါ်ပြတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Volatile (မှန်းဆလို့မရတဲ့ တက်လိုက်ကျလိုက် မတည်ငြိမ်တဲ့ ...
မြန်မာပြည်မှာ လူသိများလာမယ့် HR Software တစ်ခု
HR များရဲ့ အခက်အခဲ သာမာန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ HR ဌာနဟာ လတစ်လရဲ့လကုန်ရက်ပိုင်းလောက်ကို ရောက်လာပြီဆိုရင် သူတို့ ရဲ့ခေါင်းမဖေါ်နိုင်ကြတော့လောက်အောင်အလုပ်များတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လစာကို အချိန်မှီပေးနိုင်ဖို့အတွက် လစာကို အသည်းအသန် တွက်ချက်နေကြရပါတယ်။ ...
HR Software များအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ရရှိလာနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
ယခင်က HR လုပ်ငန်းများ အားလုံးနီးပါးကို HR ဌာနမှသာ ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြသော်လည်း၊ ယခု အခါတွင် HR Software ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဝန်ထမ်းများကလည်း ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များအချို့ကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းလာနိုင်ခြင်း၊ မန်နေဂျာများကလည်း ၎င်းတို့ ...
HR Software တစ်ခုကို သုံးသင့်နေပြီလား?
ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိHR လုပ်ငန်းတာဝန်များ HR သို့မဟုတ် Human Resource ဆိုသည့်စကားလုံးကို သင်တွေးမိသည့်အခါတွင် သင့်၏ ဦးနှောက် အထဲသို့ မည်သည့် အတွေးများ အရင်ဦးဆုံး ဝင်ရောက်လာတတ်ပါသနည်း။ သင်သည် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ HR လုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု အတော်အသင့်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါက ...
Bamawl HR with the most complete hr software suite for various industries, customizable to unique needs of any business.
It's free and simple! Register
Please register to watch videos.
Number of Employee *